तालहरुको भ्रमण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ , यी तालले तपाइलाई पार्नेछन मोहित ! - ParyatanBazar.com
तालहरुको भ्रमण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ , यी तालले तपाइलाई पार्नेछन मोहित !
काठमाडौं । नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम उपहार हो । प्राकृतिक रुपमा नेपालमा धेरै महत्वपूर्ण स्थानहरु रहेका छन् । सवै क्षेत्रलाई पर्यटन समेट्न सक्ने हो भने बार्षिक लाखौ पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । अहिले पनि नेपालमा केही हिमाली क्षेत्र र चितवन र पोखरा बाहेक क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्न सकिएको छैन ।
नेपालको पर्यटनमा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र मध्ये एक हो ताल पर्यटन । नेपालमा अहिलेसम्म पनि कति ताल छन् भन्ने अध्ययन हुन सकेको छैन । ताललाई पर्यटन संग जोड्ने हो भने तालको संरक्षण र विकास पनि हुने दावी सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । त्यस मध्ये नेपालमा सौन्दर्यले भरिपूर्ण तालको संख्या धेरै छ । कति त प्रचारप्रसार नभएरै लोप भैसकेका छन् भने, भएका जति केहि तालहरु संरक्षणको अभावमा दूषित वा लोप हुने अवस्थामा छन् ।
प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश नेपालमा केही त्यस्ता तालहरु अवस्थित छन जहाँ पुग्ने लालचा विश्वका पर्यटकलाई हुने गरेको छ । नेपालका १० वटा तालहरु रामसार क्षेत्रमा सुचिकृत समेत भएको छ । रामसार क्षेत्रमा कोशी टपु ताल, पोखरा क्षेत्रका ९ वटा, घोडाघडी ताल, बिसहजारी ताल, गोसाइकुन्ड, शे–फोक्सुन्डो, रारा, तिलिचो, पाँचपोखरी तथा छो रोल्पा ताल रहेका छन् ।
पछिल्लो समय स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको आर्कषर्ण केन्द्र रारा ताल हुने गरेको छ । विगतमा सडक यातायातमा नाजोडिएका कारण जान समस्या भएपनि पछिल्लो समय भने सहज हुदैं गएको छ । । नेपालमा भएका मध्ये सबैभन्दा ठूलो ताल हो यो । सूर्य अस्ताउँदा र उदाउँदा देखिने रारा तालको सुन्दरताले जोकोहीलाई मोहित तुल्याउँछ ।
समुन्द्री सतह भन्दा २९९० मिटर (९८१० फिट) को उचाइमा रहेको यस ताल जुम्ला र मुगु जिल्लास्थित रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको रामसार क्षेत्र भित्र पर्दछ । ५.१ किलोमिटरको लम्बाई तथा २.७ किलोमिटरको चौडाइमा फैलिएको यस तालको पानीको सतह १.८ वर्ग किलोमिटर र १६७ मिटरको गहिराइ रहेको छ । रारा ताललाई सन् २००७ मा रामसार क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको ताल हो । समुन्द्री सतह भन्दा ४९१९ मिटर (१६,१३८ फिट) को उचाईमा रहेको तिलिचो ताल मनाङ जिल्लामा अवस्थित अन्नपुर्ण संरक्षित क्षेत्रमा पर्दछ ।
४.८ वर्ग किलोमिटरको समतल क्षेत्रफलमा फैलिएको यस ताल ८५ मिटर (२८७९ फिट) गहिरो छ भने ४ किलोमिटर लम्बाइ तथा १.२ किलोमिटर चौडाइ रहेको छ । यसको प्रमुख विशेषता भनेको यहाँ कुनै पनि जलचर प्राणी छैनन् । यो तालको वरपर देखिने पहाडको दृष्यले सौन्दर्यता थपिएको छ ।
डोल्पा जिल्लामा अवस्थित फोक्सुन्डो ताल समुन्द्री सतहबाट ३६१५ मिटर उचाइमा छ । करिब ४.९४ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको यस तालको लम्बाई ५.१५ किलोमिटर तथा चौडाई ८०० मिटर रहेको छ ।
यस ताललाई सन् २००७ मा रामसार क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल हो यो । यसको गहिराई १४५ मिटर (४७६ फिट) रहेको छ ।
दोलखा जिल्लामा रहेको छो रोल्पा ताल ४,५८० मिटरको अल्टिच्युडमा अवस्थित छ । १५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस ताल गौरीशैकर संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । २७० मिटर अधिक्तम गहिरो रहेको यस तालको लम्बाइ ३.४५ किलोमिटर छ ।
इन्द्र सरोवर नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित जलाशय हो । यही सरोवरबाट निस्कन्छ कुलेखानी जलविद्युत् । प्रकृतिले बनाएका जलाशय र तालहरु बाहेक यति ठूलो ताल नेपालमा मान्छेले बनाउन सकेका छैनन् । जलविद्युत आयोजनाका लागि निर्मित यो सरोवर रमणीय पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकसित भइरहेको छ । विद्युत आयोजनाले विजुलीमात्रै दिँदैन, पर्यटकीय एवं प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पनि यति सुन्दर बनाउँदोरहेछ भन्ने प्रमाण कुलेखानीमा हेर्न पाइन्छ ।
राजधानीबाट करिब ५० किलोमिटर पार गरेर कुलेखानी क्षेत्र पुग्न सकिन्छ । हेटौडाबाट राजधानी आवत-जावत गर्ने क्रममा पनि यो रमणीयस्थलको रसस्वादन गर्न सकिन्छ ।इन्द्र सरोवरको उपल्लो क्षेत्र मार्खु बजारबाट वरपरका सहायक गाँउ जान झोलुंगे पुल प्रयोग गर्न सकिन्छ । इन्द्रसरोवरको भ्रमणपछि मार्खु बजारसँगै रहेको सरकारी भेडा फार्म पनि हेर्न लायक छ ।